Dị ka apụl na chiiz, Email na Social Media Marketing | Martech Zone
Ahụrụ m nke ahụ n'anya see okwu si Tamsin Fox-Davies, Onye Nlekọta Ọganihu Mmepe na Kọntaktị Kọntaktị, na-akọwa mmekọrịta dị n'etiti mgbasa ozi mgbasa ozi na email ahịa:
Mgbasa mgbasa ozi na email dị ka cheese na apụl. Ndị mmadụ anaghị eche na ha na-aga ọnụ, mana ha bụ ezigbo ndị mmekọ. Mgbasa mgbasa ozi na-enyere aka ịgbatị mgbasa ozi email gị ma nwee ike ịmepụta nzipu ozi gị. Ka ọ dị ugbu a, ezigbo ozi ịntanetị ga-eme ka mmekọrịta gị na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi dịkwuo omimi, ma mee ka ndị na-eso ụzọ ahụ bụrụ ndị na-azụ ahịa. Mepụta mkpọsa nke na-agafe gafee ma ọwa na nzaghachi n'ime ibe gị ma nwalee apụl na wedge cheese. Ọ bụ ihe ụtọ.
Ndifiọk ukpụhọde emi edi akpan n̄kpọ n̄ko! Mgbasa mgbasa ozi bụ iyi ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị anaghị ege ntị (ọtụtụ oge), a naghị ele ahịa ị na-akwadebe anya nke ọma. Ọ dị mkpa ịhazi oge ụfọdụ mgbe ị kwenyere na ị nwere ike ịdọrọ uche ha. Ma ọ bụ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nkwalite nke nwere ike ịnwekwu.
Ahịa email, n'aka nke ọzọ, na-etinyekarị anya raara onwe ya nye ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta onye debanyere aha gafere usoro isiokwu gị na ịgụ email gị. Dị ka a ikike dabeere push ngosi enweghị mkpọtụ niile, email na-adịkarị ike karịa na ntụgharị ntụgharị. Yabụ, onye debanyere aha ya dị oke ọnụ ahịa karịa onye na-eso ụzọ mgbasa ozi.
N'ihi nuance a, aga m agba ụlọ ọrụ ọ bụla ume ịrata ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi gị ka ha bụrụ ndị debanyere aha email. Onyinye dị ukwuu ma ọ bụ ụfọdụ ọdịnaya pụrụ iche nwere ike ime mgbanwe niile n'ịgbanwe ha. Nke ahụ apụtaghị na ọnụnọ mmekọrịta gị abụghị ihe bara uru… naanị ịkwọ ụgbọala gị na ntanetị bụ atụmatụ dị ukwuu.
Nke a bụ ndụmọdụ 12 ọzọ na Email na Ahịa Social Media anakọtara site na Kọntaktị Kpọtụrụ UK:
Tags: AllTwitter.comBryony ThomasAkara nke CommsKpọtụrụ na mgbe niileDave ChaffeyDigital Marketing strategistihe omumaemail na mgbasa ozi mgbasa oziozi ịre ahịa emailemail ndụmọdụEnchanting ahịaHenneke DuistermaatKath .aaLilach BullockLisa ChaffeyỌnye na-bụ Luke Brynley-Jones?Matt owenNicky KrielOge Oge AnyịAzụ ahịa PickleMee atụmatụ itinye akaShea Bennettezi uchemgbasa ozi mgbasa ozi na email ahịaNchịkọta Mgbasa Ozimgbasa ozi mgbasa oziTamara BaranovaTamsin Fox-DaviesTim WatsonAhịa WatertightEbe obibi
Ihe anyị meworo iji bawanye njikọ na Twitter